Naing BSell | Item - 3D Soap
Rorec ပေါင်းတင် Mask
👑 ချည်​ကွက်​ခါးရှည်​ ရှပ်​အကျီင်္ ​လေး 👑
❤❤ မျက်နှာမှာခဏခဏ ထွက်လွန်းတဲ့ဝက်ခြံတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေပြီလား???
❤❤ တင်းတိပ်၊ အမဲစက်၊ မှဲ့ခြောက်တွေကြောင့် မျက်နှာအလှလေးမပေါ်လို့ စိတ်ပျက်နေပြီလား???
❤❤ကိုရီးယားမလေးတွေလို မျက်နှာမှာ အဖုအထစ် ချိုင့်ခွက်မရှိဘဲ ပန်းရောင်သန်းပြီး ဖြူနုချင်နေပါလား???
❤❤ အရေးအကြောင်းများနဲ့အသားအရေလျော့တွဲပြီး တင်းရင်းမှုမရှိလို့ အားငယ်နေပြီလား???
ကဲခုချိန်မှာတော့ အတျဲလေးတို့ရဲ့ Skin care အထူးကု 3D Soap လေးရောက်နေပြီနော်..
💚3D Smooth Soap💚 အစိမ်းရောင်
ရှား​စောင်းလက်​ပတ်​ကိုအ​ခြေခံပီးထုတ်​လုပ်​ထားတာဖစ်​တဲ့​အတွက်​ ဝက်​ခြံဖုကြီးများ ဆားဝက်​ခြံမဲများ နှင့်​ အပူကန်​ပီးထွက်​လာ​သော ဝက်​ခြံ​လေးများအဆီခဲ​လေးများကို တစ်​ပါတ်​အတွင်းသိသာ​ပျောက်​ကင်း​စေပီး ​ချော​မွေ့လှပတဲ့မျက်​နှာ​လေးကိုပိုင်​ဆိုင်​​စေမှာဖစ်​ပါတယ်​
💜3D Clear Soap💜 ခရမ်းရောင်
စပျစ်​သီးနဲ့collagen ​ပေါင်းစပ်​ထုတ်​လုပ်​ထားတာဖစ်​တဲ့အတွက်​​ကြောင့်​မို့လို့ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ တင်းတိပ်​ မဲ့​ခြောက်​ နှင့်​ အဆီပြန်​ခြင်းများ ​နေ​လောက်​ဒဏ်​​ကြောင့်​ဖစ်​​ပေါ်လာတဲ့​နေ​လောက်​ကွက်​များကိုအမြန်​ဆုံးသက်​သာ​စေပီး collagen ရဲ့အစွမ်းအာနိသင်​က​တော့ မျက်​နှာအသာအ​ရေကိုတင်းရင်းနုပျို​စေမှာပါရှင်​ မနက်​ ည တစ်​​နေ့ နှစ်​ကြိမ်​အသုံးပြု​ပေးခြင်းဖြင့်​ တစ်ပာတ်အတွင်း ​​​သိသိသာသာမျက်​နှာအသားအ​ရေ​ပြောင်းလဲလာမှာပါ​နော်